Semalt: Ahoana no hanakanana ireo tranonkalan'ny sasany ao amin'ny Chrome amin'ny fampiasana BlockIt
feno fahasosorana ny aterineto, ary ny dokambarotra pop-up dia anisan'ny zavatra mampatahotra indrindra. Miseho ireo ao amin'ny tranonkalanao ary manakorontana ny mpampiasa amin'ny fomba maro. Plus, izy ireo dia mamadika ny mpampiasa amin'ny tranonkala tsy mila na olon-dehibe. Amin'ny BlockIt, afaka manaisotra haingana ny dokambarotra pop-up ianao sy ireo tranonkala mampiahiahy na olon-dehibe amin'ny Google Chrome. Ireo tranonkala izay mameno sy mandray ny lahatsoratra izay miditra aminao dia azo alaina mora foana amin'io fomba fiasa io.
Misy ny fandrahonana isan-karazany ao amin'ny aterineto, ary mikatsaka foana ny fiarovana azy ireo isika. Ny ray aman-dreny dia maniry ireo programa fanaraha-maso azo antoka ny ray aman-dreny napetraka eo amin'ny smartphones ny zanany mba hisorohana ny olana mahasosotra, ary ny mpampiasa dia mikaroka fitaovana fanaraha-maso tsara ho azy mba hiantohana ny fahombiazan'ny mpiasa. Ho an'ny mpampiasa Google Chrome, misy vahaolana amin'ny olana rehetra, izay fantatra amin'ny hoe BlobkIt. Fampahalalana mahazatra amin'ny tranokala malaza izay afaka mametra ny fidirana amin'ny tranonkala vitsivitsy ahafahana mijery ny votoaty tsy dia mety sy mampidi-doza rehefa mijery Internet ianao.
Eto i Michael Brown, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt , dia namaritra ny fomba sasany hanakanana tranonkala roa amin'ny Chrome amin'ny alalan'ny BlockIt.
Raha mampiasa ny version Windows ianao, izay tsy manohana ny fanaraha-maso ny ray aman-dreny, dia azonao atao ny mametraka mora foana ny fanitarana antsoina hoe BlockIt mba hanafoanana tranonkala ahiahiana vitsivitsy na olon-dehibe. Fitaovana fanampiny sy karazana hafa: // extension / ao amin'ny adiresy baorinao. Mampiseho ny fanitarana rehetra napetraka ny dingana faharoa. Ny dingana faharoa dia ny manindry ny baran'ny safidy ary mametra ny fidirana amin'ireo pejy izay tsy tianao.)
Na dia mora aza ny manakana vohikala vitsivitsy amin'ity fomba ity, dia azonao atao ny mamoha mora foana ny toerana tianao indrindra avy amin'io lisitra io. Mandehana any amin'ny sehatra Options ary esory ny URL mba ahafahana manafoana ny lisitra voasakana. Ataovy azo antoka fa namonjy ny fanovana ianao alohan'ny hamafana ireo navigateur web anao.
Raha te-hametraka ny tenimiafina ianao mba tsy hiditra amin'ireo tranonkala voasakana ny zanakao dia tokony hiditra ao amin'ny baikon'ny BlockIt ianao ary manamarina izany. Dia tokony tsindrio ny bokotra Save raha alohan'ny fanakatonana ny varavarankely.
Ankehitriny, miverena any amin'ny Google Chrome mba hahitana raha voasakana tsara ny URLs na tsia. Mila ampidirinao fotsiny ny anaran'ilay tranonkala, ary raha voasakana, dia hiseho ilay hafatra fa hitazona ity tranonkala ity. Raha te-hiditra amin'ny tranokala iray ihany ianao dia tokony tsindrio ny safidy Change Settings ary ampidiro eto ny tenimiafinao eto. Izy io dia hitarika anao any amin'ny pejy izay ahafahanao manakana na manakana ireo tranonkala mifototra amin'ny safidinao manokana.
BlockIt dia efa an-taonany maro, saingy ny habetsaky ny tranokala vitsy an'isa itapahany dia tsy hita ao amin'ny aterineto. Ny tombontsoa tsara indrindra dia ny manakana ireo tranonkala maro amin'ny Google Chrome ary tsy mamonjy ny rohy ao amin'ny backend. Plus, azonao atao ny mamaha ny tranonkala amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza Source .